ကလေးတွေရှေ့မှာ စကားများခြင်းက မကောင်းသော အကြံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် - Chit MayMay
Home Lotaya ကလေးတွေရှေ့မှာ စကားများခြင်းက မကောင်းသော အကြံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်
စိတ်သောကရောက်တဲ့အခါ၊ ဒေါသပေါက်ကွဲတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ကို မှားယွင်းသော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမိစေနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက်ကို စိတ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့ အချက်ကို မေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေရှေ့မှာ စကားများရာကနေ အော်ဟစ်တာ၊ ဆဲဆိုတာတွေ ထိန်းမနိုင်၊ မသိမ်းနိုင် ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီအပြုအမှုမျိုးက ကလေးတွေကို ဘယ်လိုသက်ရောက်နိုင်သလဲဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ စုံတွဲတိုင်းက စကားများ၊ အငြင်းပွားတာတွေရှိကြပါတယ်။ အပျော်ရွှင်ဆုံးစုံတွဲတွေတောင် ဒီကြမ်းတမ်းခက်ခဲသောကာလတွေကို ဖြတ်သန်းသွားကြရပါတယ်။ အငြင်းပွားစကားများခြင်းက တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လေ့လာခြင်းနှင့် သဘောသဘာဝကို ရှာဖွေခြင်းရဲ့ လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောနဲ့ အငြင်းပွားခြင်းက ရှောင်လွဲလို့မရနိုင်ပါဘူး။
သို့သော် ကလေးတွေရှေ့မှာ စကားများတာက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကလေးတွေရှိပါက သင့်ဒေါသကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားပြီး ဆွေးနွေးခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းထားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုက သင့်ကလေးရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို ထိခိုက်စေခြင်းမှ သိသိသာသာရှောင်ကြဉ်နိုင်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် ကလေးတွေရှေ့မှာ စကားမများသင့်တာလဲ?
၁။ သူတို့မှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ရင့်ကျက်မှုမရှိသေးပါဘူး
ကလေးငယ်တွေဟာ လူကြီးတွေရဲ့ပြဿနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး။ သူတို့ကြားတဲ့စကားလုံးတွေကို အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းက အပြစ်ရှိမှု၊ မလုံခြုံမှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ ကြောက်စိတ်အပါအဝင် မကောင်းတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ထွက်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
၂။ မကောင်းတဲ့ စံနမူနာဖြစ်စေပါတယ်
ကလေးတွေဟာ သူတို့မိဘတွေကို စံပြပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ် ရှုမြင်တယ်ဆိုတာဟာ အတိအကျတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အငြင်းပွားမှုကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ ဆွေးနွေးမှု၊ နားလည်မှုနှင့် နားထောင်မှုကို တန်ဖိုးထားတတ်အောင် သူတို့ကို ကူညီပေးပါ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ဒေါသထွက်နေပါစေ၊ သူတို့ရှေ့မှာ စိတ်တည်ငြိမ်မှုကို မဆုံးရှုံးပါစေနဲ့။
၃။ ကလေးတွေကို စိတ်ရှုပ်စေပါတယ်
မိဘနှစ်ပါးအကြား အငြင်းပွားမှုက ကလေးတွေကို တစ်ဖက်ဖက်မှာနေဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေမှာ သူတို့မပြနိုင်သော်လည်း မိဘတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အမြင်ကို ကြားရခြင်းဖြင့် သူတို့ အရမ်းစိတ်ရှုပ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေက မိဘတွေအပေါ် မယုံကြည်မှုနှင့် မကျေနပ်မှုကိုတောင် ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
မိဘတွေရဲ့ စကားများမှုက ကလေးတွေကို စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရစေနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် ကျောင်းစာကို အာရုံစိုက်လို့မရတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကလေးဘဝစိတ်ဖိစီးမှုက ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ထိတ်လန့်ခြင်း၊ သင်ယူမှုခက်ခဲခြင်းစတဲ့ ပြင်းထန်သောအခြေအနေတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
၅။ အကြမ်းဖက်မှုအတွက် ထုံးစံတစ်ခုလို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်
အငြင်းပွားမှုများစွာဟာ အကြမ်းဖက်တဲ့အပြုအမှုကို ဦးတည်စေတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို လျစ်လျူရှုထားလို့ မရနိုင်ပါဘူး။ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် အကြမ်းဖက်မှုကို ဖော်ပြနေရုံသာမက ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ခံစားမှု ကျန်းမာရေးကိုပါ ဆိုးရွားတဲ့ အကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပြန်လည်သင့်မြတ်တာကို ကလေးတွေ မြင်ဖို့လိုသလား?
အချို့လူတွေက ကလေးတွေရှေ့မှာ စကားများတာကို အမြဲတမ်းရှောင်ဖို့ မလိုဘူးဟု ဆိုကြပါတယ်။ ဒါက ဘဝရဲ့ ပြဿနာတွေကို တင်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်း ပြည့်စုံတာမရှိကြောင်း ပြသတဲ့နည်းလမ်းလို့ သူတို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ကလေးတွေအား ပြဿနာကို နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ ဖြေရှင်းတတ်အောင် သင်ပေးဖို့ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက လေးစားမှု၊ စာနာမှုနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေပေါ်မှာ အခြေခံရပါမယ်။ ဒီလိုစကားပြောဆိုတဲ့အခါ သမ္မာသမတ်ကျပြီး ချင့်ချိန်တတ်ရပါမယ်။ ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ မိဘတွေအနေနဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ ကောင်းကွက်ကို တစ်ယောက်က အလေးအနက်ပြုခြင်းဖြင့် ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ ကြင်နာစွာ ထွေးပိုက်ခြင်းကဲ့သို့သော ချစ်ခင်မှုရဲ့လက္ခဏာတွေကို ပြသပါ။ မိသားစုစံနှုန်းက နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဟု ကလေးတွေ ခံစားရဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
Chit MayMayမှ ရေးသားဖော်ပြနေတဲ့ ဆောင်းပါးများကို အခြားသော Media ၊ Website များနဲ့ Facebook Page များမှာ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်း မပြုပါရန် လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။
Previous articleကလေးတွေကို အိမ်မှာ စာဖတ်ချင်လာအောင် လှုံ့ဆော်ဖို့ နည်းလမ်း (၄)ခု
Next articleကလေးငယ်တွေဖျားနာခြင်းမဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများ
ကလေးငယ်တွေရဲ့ အပြုအမှုကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း နည်းစနစ် (၅)ခု
Baby walker တွေက သားသားမီးမီးတို့အတွက် အမှန်တကယ်ဘေးကင်းရဲ့လား ???
Mom and Baby162
Hein Myat - September 18, 2020 0